စကားပြောခန်းမပါတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဝတ္ထု | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← အကျီ င်္ ခြုပ်ဖို့ ယူလားခရေ
ဝတ္ထုတို ကောင်းကောင်းလေး တပုဒ်လောက် ချီးမြှင့်ပါဗျို့။ “ကောင်း ကောင်းလေး” တဲ့။ “ချီးမြှင့်” ပါတဲ့။ ငါ့နဲ့။ သူကတော့ တလေးတစား ပါပဲ။ အယ်ဒီတာလဲ အယ်ဒီတာ၊ ကိုယ်တိုင်လဲ စာရေးကောင်း၊ သူ့လို စာ ရေးဆရာအယ်ဒီတာဆီက စာမူပေးဖို့ တောင်းလာတဲ့စာပါ။ “ချီးမြှင့်” ပါဆိုတဲ့စကားက အယ်ဒီတာတွေ သုံးရိုးသုံးစဉ် လို့ ပြောနိုင်ကောင်း ပေမယ့် “ကောင်းကောင်းလေး” ဆိုတဲ့ စကား အသုံးအနှုန်းက ကိုယ့်ကို တာဝန်ကြီးသွားတာပေါ့နော။ စာတပုဒ် “ကောင်းကောင်းလေး” တိတိ ကျကျပြောရရင် “ဝတ္ထုတိုတပုဒ် ကောင်းကောင်းလေး” ဖြစ်ဖို့က တော်တာ် ဒုလ္လဘဆန် တာပဲ။ ငါလိုကောင်ကရော တကယ် “ကောင်းကောင်းလေး” ရေးတတ်ပါရဲ့လား။ အလဲ့.. ဘယ်ဆိုးမလဲ။ ငါ့ဆီက “ကောင်းကောင်းလေး” ရနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တာကိုက ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် ဘဝင် ကျစရာ အထင်ကြီးစရာလို့တွေးရင်ရော မရတတ်လား။
ဒါပေမယ့် ဒီအတွေးက သက်ဆိုးမရှည်ဘူး၊ ခဏလေးပဲ ရပ်သွားတယ်။ “ကောင်းကောင်းလေး” ဖြစ်ဖို့ အသာထား။ ဒီမှာ ဝတ္ထုတို တပုဒ် ရေးလို့မရ ဘူး ဖြစ်နေ တယ်။ ဒါလဲ မဟုတ်သေးဘူး။ ရေးလက်စ အတိုလေး သုံးပုဒ်ရှိ တယ်။ ရေးချင်နေတာလဲ သုံးပုဒ်မကရှိတယ်။ ရေး လက်စကို အနားလုံး (အချောကိုင် ပြီး) ပို့လိုက်ရင်ရော။ ဒါဆို စာမူပို့ဖို့ (၁၅- ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား ချီးမြှင့်ပါ) ရက်သတ် ထားတာကို မီမှာ။ ခက်တာက ဒီသုံးပုဒ်လုံးနဲ့ သူတို့ဂျာနယ်က သိပ် ဟာမိုနီမဖြစ်ဘူး။ အတိုလို့ ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်စာက စပေ့ (Space) နဲနဲများ နေတယ်၊ ရှည်နေတယ်။ အကြောင်းအရာပိုင်းလဲ ပါတာပေါ့။ ချုံ့လိုက်ရင်လဲ ဝန်မင်းပုဆိုး ကြွက်ကိုက်ထားသ လို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်၊ မမိုက်ဘူး။
ဒါနဲ့ပဲ ခေါင်းထဲမှာ အပြင်ထွက်ချင်လို့ကဆုန်ပေါက်နေတဲ့ အမီနာကျီ့ အကြောင်း ရေး ရကောင်းမလား စိတ်ကူးမိတယ်။ ရန်ကုန်ဆင် ခြေဖုံးက နို့ကုလားမ တယောက် အကြောင်း။ စတီးရောင်ပြေးနေတဲ့ နို့ပုန်းတွေကိုခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ လေဟာပြင်ဈေးနားက နို့ဈေးကို နေ့စဉ်နို့ပို့နေတဲ့ မြန်မာပြည်ပေါက် အိန္ဒိယ သူပေါ့။ နားပေါက် အကျယ်ကြီးမှာ ကြေးကွင်းကြီးတွေတဖက်တချက်နဲ့။ နှာသီးဖျား မှာလဲ အပေါက်ဖောက်ပြီး နားမှာပန်သလို ကျောက်နီနှာကပ်ပန်လို့။ အဲဒါကို ဘာခေါ်လဲ မသိဘူး။ (ရေးသာ ရေးချင် မလေ့လာမိခဲ့)။ ထားပါတော့၊ နားမှာကပ်ပန်ထားတာကို နားကပ်လို့ခေါ်ရင် နှာခေါင်းမှာ အပေါက်ဖောက် ကပ်ထားတဲ့ ဟာကို နှာကပ်လို့ပဲ ရေး မယ်။
အဲဒီ့အမီနာကျီက စာဖတ်တယ်။ ပေါ့ပေါ့တော့မထင်နဲ့။ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) တို့၊ နွမ်ဂျာသိုင်းတို့၊ ငြိမ်းကျော်တို့ကိုမှ ဖတ်တာ။ ဖတ်တာမှ နွားကျောင်းရင်းနဲ့ ဖတ်တာ။ နွားတွေကို စားကျက်ထဲမှာ လှန် ထားပြီး သူက နေရိပ်ကောင်းကောင်းလေးမှာ အမှီရှာပြီး ဝတ္ထု ဖတ်တော့တာ။ ဗမာစာ ဘယ်နှတန်း တတ်တယ်မသိဘူး။ သူ့လက်ထဲမှာ ဝတ္ထု စာအုပ်ကတော့ ပြတ်တယ်ကိုမရှိတာ။
ညနေညနေ နွားသွင်းချိန်ရောက်ရင် အမီနာကျီ့ခြေလှမ်းက စားကျက်ထဲက စပိုး နင့်ပြီးပြန်လာတဲ့ သူ နွားအုပ်လိုပဲ ခြေလှမ်းတွေ လေး တိလေးကန်နဲ့။ သူကတော့ အစာဝ (အဲလေ) တခုခုစားလာလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ မော့လာလို့။ မောလာလို့ မဟုတ် ဘူးနော်။ မော့လာ လို့။ သူနွားကျောင်းရင် ယူယူသွား တတ်တဲ့ လွယ်အိတ်ထဲမှာက ငုံဖို့ကွမ်း၊ သောက်ဖို့ရေဗူး၊ ဝတ္ထုစာအုပ်နဲ့ ပုလင်းပြားလေးတပြားဗျ။ ကွမ်းလေးငုံ၊ ဝတ္ထုလေး ဖတ်ပြီး ညနေစောင်းလို့ နွားတွေ စားကျက်ထဲက ခေါင်းတမော့မော့ဖြစ် လာပြီ တောင်တောင်အီအီတွေ (အစာ ဝတော့ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားဗျာ) ဖြစ်လာပြီဆိုရင် သူကလဲ ချိန်သား ကိုက် ပုလင်းပြားလေးကို ဖွင့်ပြီ။ အရက် တကျိုက်၊ ရေတ ကျိုက်။ နွားတွေ ချည်တိုင်ပြန်ပြီ ဆိုမှဖြင့် အမီ နာကျီ့ခြေလှမ်းကလဲ ဟိုလူ့ဝင် တိုက်တော့မလို၊ ဒီလူ့ ဝင်တိုက်တော့မလို ဒယီးဒယိုင်။ တနေကုန် နွားစားကျက်ထဲ မပြောခဲ့ရတဲ့ ပါးစပ်ကလဲ ဘာတွေပြောလာဆိုလာသလဲ မသိ။ ဆဲတာလား ဆိုတာလား မကွဲဘူး။ ဆိုတယ်ဆိုတာ သီ ချင်းကိုပြောတာ၊ ဗမာသီချင်းလား၊ ကုလားသီချင်း လား လေလုံးက မကွဲ တော့ဘူး။
အမီနာကျီ ဘာကြောင့် အရက်သောက်တာလဲဆိုတော့ ကိုယ်လဲမသိဘူး။ ကုလားမ တယောက်မို့ ပါလို့ ပြောရင် ကိုယ်တို့လမ်းထိပ်က ပန်းရောင်းတဲ့ ဒေါ်လှမြင့်ကြီးလဲ အရက်သောက်တာပဲ။ ကုလားမတွေ ဗမာမတွေနဲ့တော့ အရက်သောက်တာမဆိုင်ဘူး ထင်တာပဲ။
သူ့မရှိတဲ့ ဟာနဲ့ တိုင်းထွာဆဲတော့တာမှ မိုးမွှန်နေရောပဲ။ အမီနာကျီ ကတော့ ဆဲတာလား ဆိုတာလား ဆိုတာကို ကိုယ်လဲမသိဘူး။
ကိုင်း အမီနာကျီ့အကြောင်း ဘယ်လောက်ရေးဖို့ကောင်းသလဲ။ ခေါင်းထဲမှာ စီထားပြီးသား။ ဟို ရေးလက်စ သုံးပုဒ်ကိုလှည့်မကိုင် သေးဘဲ အမီနာကျီ့ အကြောင်းရေး လိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား။ ၁၅ ရက် နေ့မီအောင် ဝေါခနဲရေသွန်လိုက်သလို ချရေး လိုက်ရင် ရမှာ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ဂျာနယ်နဲ့က မကိုက်ပြန်ဘူးထင်တယ်။ ပြီးတော့ အမီနာကျီအကြောင်းက ဟိုး လွန်ခဲ့ တဲ့ အနှစ် ၂ဝ အစိတ်က။ ခု နေပြန်ကြည့်ရင် ဝတ္ထုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ အယ်ဒီတာမင်းပြောတဲ့ “ကောင်းကောင်းလေး” တော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တွေ ဘက်ကတော့ ရေးရင်ကောင်းမှာပဲ ဆိုပြီး ရေးကြတာပါပဲ။ ကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်း ဆိုတာကတော့ စာဖတ်သူရဲ့မနှောနဲ့ “ဟပ်မိ” မှ ဖြစ်ရတာမျိုး မဟုတ်လား။ နောက်ပြီး ကိုယ်စဉ်းစားမိတာက လတ်တလောကိုယ်နေနေရတဲ့ ဘဝပတ်ဝန်းကျင် အငွေ့ အသက်ကို ရေးတာကမှ ပိုကောင်းမလားထင်မိတယ်။ လက်ရှိ ကိုယ့်ဘဝက တောကြီး မျက်မည်း ထဲရောက်နေရတဲ့ ဒုက္ခသည်တယောက်လေ။ အဲဒီ့အကြောင်းတွေရေးရင် ပိုကောင်း မှာပေါ့။ တာဝန်လဲရှိတယ်လေ။ စာရေးသမားဆိုတာ ကိုယ်နေတဲ့ ဘဝ ဝန်းကျင် ကို ထပ်ဟပ်ရိုက် ခတ်နိုင်မယ်ဆိုတယ် မဟုတ်လား။
ဟုတ်တယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲက ဘဝပုံရိပ်တွေလဲ ကိုယ့်မှာရေးချင်တာတွေ အများကြီး။ ရေးဖို့ မောင်းတင်ထားတာတွေမှ တကယ့် ကို အများကြီးပဲ။ ဒီက ဘဝတွေလဲ စာဖတ်သူတွေ သိစေချင်တယ်။ ကိုယ်တို့တတွေဟာ ဘဝတလျှောက်လုံး ဘယ်စဉ်ကမှ သဲ့သဲ့ လေးတောင် မစဉ်းစားဘူးတဲ့ “ဒုက္ခသည်” ဆိုတဲ့ဘဝကို ရောက်နေတာ ရတာက လား။ ရိုးရိုးပဲ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ ကျနော်ကြီးလာရင် ဒုက္ခသည်လုပ် စားမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဘယ်သူမှ စာစီစာကုံးတပုဒ် ရေးခဲ့ဖူးမယ် မထင်ပါဘူး။ ခက်တာက ခုပြန်ကြည့်တော့ ဒို့ ဒုက္ခသည် သွားလုပ်ကြမယ်၊ ဒါမှ အမေရိကားတို့ ဘာတို့ ရောက်မှာဆိုတဲ့ မျှော်မှန်းချက်နဲ့ လာတဲ့ လူတွေလဲ တွေ့လာရတော့ ပြောရ ခက်ကြီးပဲ။ ဒုက္ခသည် လာလုပ်ဖို့ ငွေပုံငွေရင်းနဲ့လာတဲ့ လူတွေ ရှိလာသဗျ။ တချို့ ကိုယ်တို့ဆီမှာ ဒုက္ခသည် လာလုပ်တဲ့ လူတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် မိုးကြိုးပစ်ရ ပါစေရဲ့ ဒုက္ခသည်ပါဗျလို့ ကြိမ်ပြောရမလောက်ပဲ။ ကြေးရတတ်တွေ၊ လူကုံထံတွေ၊ ပညာတတ်လေးတွေ၊ ရွှေ တွဲလွဲ ငွေတွဲလွဲ။ တချို့ ငွေစက္ကူအစိမ်းတွေဘာတွေ ကိုင်ပြီးသုံးနိုင်တဲ့လူတွေ။ ဝတ်ပုံစားပုံတွေကလဲ မခေကြပါခင်ဗျ။ စကပ်ပေါင် တိုအကွဲ၊ ဘောင်းဘီထည်လဲ၊ ဘွတ်တွေ ရွှတ်တွေအမျိုးမျိုး။ လူ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ အရွယ်ကလဲ မျိုးစုံပဲကိုဗျာ။ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ သူတို့က ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာ လက်ပတော့တွေ နုတ်ဘုတ်တွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီနဲ့။ ဇာတ်လမ်း သဘောနဲ့ပြောရရင် တောခန်းတောင်ခန်းထဲ ရောက်နေတာတောင် ကိုယ်ရောင် ကိုယ်ဝါတွေက တညီးညီး တဝင်းဝင်းနဲ့ပါ။
ဆိုတော့ နှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမယ်ထင်တယ်။ ဒုက္ခသည် တကယ်ဖြစ်ရမှာမို့ ဖြစ်လာတာရယ်၊ ဒုက္ခသည် ဖြစ်ချင်လွန်းလို့ ဒုက္ခရှိရာနေရာကို တမင် ဒုက္ခရှာလာတဲ့ သူရယ်လို့။ ဒီနှစ်ခုပေါ့နော။ ဒီလို အတန်းအစား နှစ်ခုခွဲကွဲတယ်။ ဒါတွေကို ကိုယ်စာရေး ချင်တယ်။ ရေးလို့ကိုမဆုံး နိုင်အောင် ရေးချင်စရာတွေပဲ။ ဘယ်လိုပဲဆိုစေ လူတွေ စုဝေးနေရင် လူ့အဖွဲ့အစည်း တရပ်ဖြစ်လာတယ်။
လူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတိုင်းမှာ လူမှုပဋိပက္ခတွေမကင်းဘူး။ မတူညီတဲ့ အတန်း အစားနှစ်ခုကြောင့် ပြဿနာတွေရှိနိုင်သလို အတန်းအ စားတခုချင်းမှာလဲ လူမှုပဋိပက္ခတွေ ဆိုတာ ရှိတာပဲ။ အစုလိုက်အ ဖွဲ့လိုက် ပြဿနာကြီးငယ်ရှိသလို တဦးချင်း တမိသားစုချင်း ဆီမှာလဲ ပြဿနာရှိတာပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့တွေ ဘာလို့ဒုက္ခသည်ဖြစ်လာ ကြရတာလဲ။ ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်။ ပြောစရာတွေအများကြီး။ ဆုံးနိုင်မယ်တောင် မထင်ဘူး။
ဆိုတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းပဲ ပြောကြမယ်။ စခန်းထဲ မှာလဲ ပြဿနာတွေ ရှိတာပေါ့။ အဓိကအကျဆုံး အခြေခံပြဿနာက တော့ စား၊ ဝတ်၊ နေရေး ပြဿနာ။ ဒါ အဓိက အကျဆုံး။
ကြည့်၊ ကိုယ်ဆိုရင်ပဲ သက်ဆိုင်ရာကနေရာချထားပေးတဲ့ အိမ်ကလေးက (တကယ်တော့ တဲအိမ် လေးပါ) ယိုင်ရွဲ့နေပြီ။ ဘေးကို စောင်းပြီး ရှေ့ကိုငိုက်ကျနေပြီ။ ဒါက တဲရှေ့က အမြင်။ နောက်ဘက် ကကြည့်ရင် နောက်ဖေးအဖီက ပယ်တယ်တယ်ဖြစ်နေပြီ။ ပြို ကျလုကျခင်ပဲ။ မဖြစ်ခံမလားဗျာ။ တနှစ်နေရမယ့် တဲကို သုံးနှစ်သုံးမိုး မက နေနေရတာ မဟုတ်လား။ ခေါင်ယိုရင် ခေါင်တက်ဖာ၊ တိုင် ဆွေးရင် တိုင်ဆွေးနဲ့ပြန်ဆက်။ ကြမ်းကျိုးရင် ရှိတာနဲ့စပ်။ ဒီလိုစခန်းသွားနေရတာမဟုတ်လား။ ကိုယ့်အိမ်ဆို တိုင်ခြေတွေ အားလုံး ပြတ်ပြီး မြေကြီးပေါ်တင်ရုံလေး တင်နေတော့တာ။ အိမ်ပေါ်တက်လိုက်လို့ များဖြင့် ငြိမ့်ခနဲ သိမ့်ခနဲ။
ယူအဲန်အိပ်ခ်ျစီအာရ်လို့ခေါ်တဲ့ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှာက ရန်ပုံငွေ ပြတ်နေပြီတဲ့။ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာက ဒုက္ခသည် တွေ တနေ့တခြား တိုးတိုးလာ။ ကိုယ်တို့ဆို ပြီးခဲ့တဲ့ မိုးဦးအစမှာ အိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့ဆိုပြီး ယူကလစ်တိုင် နှစ်တိုင်၊ အင်ဖက်မိုးက (၁ဝဝ) လား၊ (၁၅ဝ) လား၊ ပြီးတော့ ဝါးက အလုံး (၄ဝ-၅ဝ) ယူအဲန်က ပေးတယ်။
အိမ်တအိမ်လုံးက ပစ်ရနေပြီ။ ဒါနဲ့ပြန်ဆောက်ရမယ်ဆို တော့ .. အင်း တိုင်နှစ်လုံးနဲ့ အိမ်တအိမ် ဘယ်လို အင်ဂျင်နီယာမျိုးက ဆောက်တတ်လေမလဲဆိုတာတော့ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့။ ဒါပေမယ့် အကျိုးတော့မယုတ်ဘူးဗျ။ ဝါးတို့တိုင်တို့ အင်ဖက်မိုးတို့ လက်သိပ်ထိုးဈေးကွက်လေး ဖြစ်သွားတာပေါ့။
တတ်နိုင်တဲ့လူတွေက မတတ်နိုင်တဲ့လူတွေဆီမှာ လိုတာဝယ်ကြ။ ပြီးတော့ မြေကွက်လပ်လေးတွေ ရှိရာမှာ အိမ်သစ်လေးတွေ ဆောက်ကြ။ စခန်းမှာ တရားဝင် သတ်မှတ်ထားတဲ့အိမ်တွေအပြင် နံပါတ်ပွား အိမ်ကလေးတွေ ဟိုနေရာက ဘွားခနဲ ဒီနေရာက ဘွား ခနဲ ပေါ် ပေါ်လာတာပေါ့။ မိုးဦးကျ မှိုလေးတွေ လိုပေါ့ဗျာ၊ နော။
အိမ်တအိမ်ဆို အေ ဘီ စီ ဆိုပြီး အိမ်နံပါတ်တွေ ပွားယူလိုက်တာ လက်ဆယ်ချောင်းတောင် ရှိဆိုပဲ။ ဖက် ဝါး ရောင်းလိုက်ရတဲ့ လူတွေ အဖို့ကတော့ ခရိုး ခယိုင်တဲကုပ်လေးတွေ ထဲမှာ နေမြင်လမြင် ဖြစ်သလိုနေပြီး တတိယနိုင်ငံ တခုခုကို မြန်မြန် ရောက်ရပါစေကြောင်း ဘုရားမှာသာ ပုဆိန်ပေါက်ဆု တောင်းကြပေရော့။
အင်း..၊ ဒါတွေကိုကျော်ပြီး အမီနာကျီရဲ့ “အရက်ချို အချစ်ခါး” အကြောင်းရေးပြန်ရင် မကောင်းဘူး ထင်တယ်။ စာရေးသူဆိုတာ လက်တွေ့ပစ္စက္ခ ဘဝအခြေကိုပိုပြီး စူးစူး ရှရှပြတ်ပြတ် သားသား မြင်ပြရေးပြဖို့ တာဝန်ရှိတာကလား။ ခက်တာက ဒါတွေချည်းရေးပြနေ လို့က ဒုက္ခသည် ညည်းချင်းတွေပဲ ဖြစ်နေမလား။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ဆိုသလို ကိုယ့်အဖြစ်နဲ့ကိုယ် ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကိုပဲ ရိုး မယ်ဖွဲ့ရေး နေရတာလဲ လမ်းမကျသေးပါဘူး။ တကယ်ပဲ ဒုက္ခသည်စခန်းတနေရာမှာ ကိုယ်တို့တွေက ဘဝကို ရေစုန်မျောနေကြပြီ လား။ ရေစုံမျောလိုက်ကြပြီလား။ အားမဲ့မာန်မဲ့ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ကုန်ကြရော့ သလား။
ဒါလဲ မဟုတ်သေးဘူး။ ဟောကြည့်။ ကိုယ် ၁၅ ရက်နေ့အမီ စာမူပို့ပေးပါလို့ အကြောင်းကြား လာတာကို မီအောင်မရေး လိုက်နိုင်တာ ကပဲ ရေစုန်မျောနေလို့မှ မဟုတ်ရတာ။ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အလုပ် တခုကို တာဝန်အရ ခံယူမှုအရ လုပ်နေရတာကြောင့်ပဲဟာ။ ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်တို့ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရေရှည်အကျိုးရှိမယ့် အလုပ်တခုကို ကိုယ်ယုံယုံကြည်ကြည် စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်နေလို့ပဲလေ။ ဒါက ချဲ့ရင် ချဲ့ သလို ကြီးကျယ်တဲ့ ရေရှည်အကျိုးစီးပွား။ တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းကြား တဦးအပေါ်တဦး ယုံကြည်နားလည် ချစ်ကြည်ပေါင်း စည်းနိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းချက်။ ဒါကိုပြောနေကြတာကြာပြီ။ အစည်းအဝေးခန်းမတွေမှာ မိန့်မိန့်ကြီးထိုင် လက်ပိုက်ပြီး အတည်အခန့်ပြော ချင်ပြောမယ်၊ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာ သေနတ်ကိုပိုက် တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီး ပြောကောင်းပြောနေမယ်။ တခုမှမမှားဘူး။ သူ့နည်း နဲ့သူ အဟုတ်ချည်းပါပဲ။ ကိုယ်တို့ကတော့ ဒါကို ဒုက္ခသည်စခန်းတနေရာမှာ လုပ်နေကြတာဆိုတော့ တမျိုးကြီးများဖြစ်နေ မလားပေါ့။
စခန်းထဲမှာ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် သတိထားမိတော့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံသလောက်ရှိတယ်။ ကရင်လူထုက အများဆုံး။ နောက် ဗမာ၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ဘိတ် (မြိတ်) ထားဝယ်၊ ကယန်း။ ပြီး တော့ ပအို့ဝ်း။ စုံမှစုံပဲ။ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာပေါင်းကလဲ စုံတယ်။ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အစုံရှိကြတာပါ။ လူဦးရေကလဲ သောင်းဂဏန်း။ ကလေးလူကြီးပေါင်း နှစ်သောင်း ဝန်း ကျင် ရှိမယ်။ လူမျိုးဘာသာခြားသလို ဓလေ့ထုံးတမ်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကလဲ စုံတယ်။ ဘဝနယ်ပယ်အရ ကြည့်ရင်လဲ ဆရာဝန်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ယူထားတဲ့လူတွေ၊ အိုင်တီနည်း ပညာတတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီး ယား စတဲ့ ဘာသာစကားတတ်မြောက်သူတွေ၊ ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ အဆိုတော်၊ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ အယ်ဒီတာ၊ ပန်းချီ ဆရာ စုံလိုက်သမှ။ ပန်းပုဆရာတောင် ပါသေး။
ဒါကို ကရင်အမျိုးသားကြီးတဦးက သတိပြုမိတယ်။ သူက အရင်ကတော့ လက်နက်ကိုင်တိုက် ပွဲဆင်နွှဲလာတဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးပေါ့။ ဒီဖထီးက တခါတော့ စခန်းထဲမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုမျိုး စုံကို ဖိတ်ပြီး ဒုက္ခသည်ဘဝတူချင်း ဒီနေရာကနေ စပြီး အချင်းချင်းကြား တဦးနဲ့တဦး နားလည်မှု တည်ဆာက်ကြ ရအောင်လား။ ချစ်ကြည်မှုတည်ဆောက်ကြည့်ရအောင်လားဆိုပြီး အဆိုပြုတယ်။ အ နိမ့်ဆုံး မျှော်မှန်းချက်အဖြစ် စခန်းထဲမှာ လူမျိုးတမျိုးနဲ့တမျိုး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှု ထိန်းသိမ်းနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့။ လုံခြုံရေးအရလည်း ပါ တယ်ပေါ့။ ဒီ့ထက် လူမျိုးတမျိုးနဲ့တမျိုး ခြားနားကွဲပြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံတွေ အပြန်အလှန်နားလည်အောင် လုပ်ကြည့်ကြရ အောင်လားပေါ့။
ကိုယ်တော့ ဒီအဆိုကို သဘောကျသွားတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ဒါ သိပ်အခြေခံကျတာပဲ။ လက်တွေ့ ဘဝနဲ့လဲ စပ်ဟပ်တယ်။ တတိယ နိုင်ငံ တနိုင်ငံကိုထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်လာခဲ့တာမှန်ပေမယ့် စခန်းထဲမှာ အလကားမတ်တင်းနေမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ကိုယ်မထားနိုင်ဘူး။ ကိုယ်တို့တတ်နိုင်သမျှ မျှော်ရည်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေထဲမှာ ကိုယ့်လူထု ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိရာရှိကြောင်း ရတဲ့ဒေါင့်ကနေလုပ်ဖို့ မမေ့မလျော့တဲ့စိတ် အမြဲရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် နေရာတကာမှာ နိမ့်ကျနေခဲ့ရတဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီအကို မောင်နှမတွေအတွက် ကိုယ်တို့မှာလဲ တာဝန်မကင်းဘူးလို့ ခံယူတယ်။ ဒီတော့ ဒီ ဖထီးအဆိုပြုလာတဲ့အပေါ် ကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ တက်တက်ကြွကြွပဲ ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။
ခုဆိုရင် ဒုက္ခသည်အချင်းချင်းကြားမှာ တယောက်ရဲ့ အားသာချက်ကို တယောက်ကိုဝေ မျှတဲ့ ပညာရပ် ဆိုင်ရာဖလှယ်တဲ့ (သင်ကြား တဲ့) သင်တန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်လို အိုင်တီနည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းမျိုးတွေ၊ အင်္ဂလိပ်စာ စကား။ ဂျပန်စာ စကား၊ ကိုရီးယားစာ စကား စတာတွေသင်ဖို့ တိုင်းရင်းသားသင်တန်းကျောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရင်ပြင်ဆိုတာကို ဖွင့်လှစ်ပြီး ကိုယ့်အား ကိုယ့်မာန်နဲ့ ကိုယ်တို့ လှမ်းလျှောက် ကြည့်နေကြပြီ။ အခက်အခဲတွေတော့ အများကြီးပေါ့။ ဒုက္ခသည်စခန်းဆိုတော့ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းက
လဲ ရှားပါးသား။ ငွေကလဲ တွင်းနက်လိုက်သမှ။ ဒီကြားထဲ နှစ်ပရိစ္ဆေဒနဲ့တည်အောင် ရှည်ကြာခဲ့တဲ့ တဦးအပေါ်တဦးသံသယ စိတ် ကလဲ ချက်ချင်း ဘယ်အကင်းသေနိုင်ကြ ပါ့အုံးမလဲ။ ဒီလိုသင်တန်းတွေအပြင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးတမ်းတွေကို တဦးနဲ့တဦး ကြား သိမြင်နားလည်လာဖို့ တပတ်တခါ အလှည့်ကျ ထုတ်ဖော်ဟောပြောပွဲလေးတွေလဲ လုပ်ကြဦးမှာ။ မိမိရိုးရာ ဂီတ အဆိုအက၊ အတီးအမှုတ်၊ သီချင်း၊ စာပေ၊ အစားအသောက်တွေကအစ ဒါတွေ အားလုံးကို လုပ်ကြမှာလေ။
ဖထီးကတော့ပြောတယ်၊ ဒါ အနာဂတ် ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး အတွက် လက်တွေ့ ကျတဲ့ စမ်းသပ်ကွင်းလေးတဲ့။ ငါတို့ ဒုက္ခသည်ရိက္ခာ ထိုင်စားပြီးနေတာ ထက် အဓိပ္ပာယ်တခုကို ယုံ ယုံကြည်ကြည်ဖော်ဆောင်နေတာ အရှုံးထဲက အမြတ်ရှာ တာတဲ့။
ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်တို့တွေဟာ အဲဒီ့ တိုင်းရင်းသားသင်တန်းကျောင်းရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရင်ပြင်ထဲမှာ တယောက်ရဲ့တယောက် အပြုံးချင်း ဖလှယ်လာကြတယ်။ တယောက်ရင်ကို တယောက် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖွင့်ဖတ်နေကြတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုချင်း ဝတ်မှုန်ကူးကြတာလေ။ ဒီအ ခြေခံကနေန ချစ်ကြည်မှုကို တည်ဆောက်ကြရမှာ မဟုတ်လား။ အာဏာရှင် တယောက်ယောက်က အတင်းဇွတ် လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ် တဲ့ ချစ်ကြည်မှုတွေ လတ်ဆတ်တဲ့ အပြုံးတွေနဲ့ လက်ချင်းယှက်လို့။
အင်း ဒါလဲ ဝတ္ထုတပုဒ်လောက်ရေးမယ်ဆို ရေးလို့ရတာပဲ။ အယ်ဒီတာမင်းများ ကြိုက်မကြိုက် တော့မသိ။ သူပြောတဲ့ ဝတ္ထုတိုကောင်း ကောင်းလေး တပုဒ်တော့ ဖြစ်လာကောင်းရဲ့လို့ ထင်မိတာပဲလေ။ ငြိမ်း ချမ်းရေး ဝတ္ထုတပုဒ်ပေါ့ ဗျာ။ နော။
သစ်ခက်သံလွင် ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted on March 29, 2011, in ဆောင်းပါးကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.